सरकारले अष्ट्रेलियाका राजदूतलाई किन फिर्ता बोलायो, एस्तो रहेछ कारण ? — Imandarmedia.com
सरकारले अष्ट्रेलियाका राजदूतलाई किन फिर्ता बोलायो, एस्तो रहेछ कारण ?
काठमाडौं । सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाललाई फिर्ता बोलाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत दाहालले आफूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीमार्फत जानकारी पाएको बताए ।